Antsohihy sy i Midongy Atsimo: nahatrarana rongony 18 sy fito gony avy | NewsMada
Manerana ny Nosy mihitsy ny fanaovana trafikana rongony amin’izao fotoana izao. Mbola voaporofo indray fa any amin’ny manodidina an’Ambanja ny any avaratra, ary any Midongy ny any atsimo misy ny saha midadasika fambolena azy. Samy nahatrarana gony maromaro feno rongony ireo.
Efa manerana ny Nosy, ankehitriny, ny fanaovana trafikana rongony. Isan’izany ireo 18 kitapo milanja 187 kilao tra-tehaky ny zandarimaria, ny talata teo manodidina ny tamin’ny 6 ora hariva tao amin’ny kizon’Antsahalalina, 3 kilometatra atsimon’ny fokontany Betsipotika, kaominina Atsahabe, distrikan’Antsohihy. « Rongony avy any Ambanja ary nokasaina hoentina any Mahajanga ity tratra ity raha ny re tamin’ny fampahalalam-baovao », hoy ny kapiteny Ramangasoa Harimanana, kaomandin’ny zandarimaria ao Antsohihy, azo an-telefonina, omaly. Nambarany fa vatan-dehilahy fito ny nilanja ireo gony ireo tamin’io fotoana io ary nitsoaka avy hatrany izy ireo raha vao nahatazana ny zandary nanenjika. Narian’izy ireo, nandritra izany, avokoa ireo entana nolanjainy, raha ny angom-baovao voaray hatrany. Nohamafisiny koa fa efa nodorana avokoa ireo gonin-drongony rehefa tonga tao Antsohihy taorian’ireo dingana rehetra nanaovana nanadihadiana izany. Raha ny fanazavanan’ny kaomandin’ny zandarimaria, efa nahatratra 2, 500 t ny rongony sarona tao amin’ny faritra tao anatin’ny telo volana tamin’ity taona ity. Mbola karohina kosa ireo jiolahy nitondra izany, raha ny nambaran’ny loharanom-baovao.
71 kilao hafa tao Midongy Atsimo
Ankoatra io, saron’ny zandary koa tao Midongy Atsimo ny rongony mitotaly 71 kilao tao anaty kitapo miisa fito hafa, nandritra ny fisafoana notanterahin’izy ireo ny alin’ny alakamisy teo tao Ambalahoraka, fokontany Vohimanoro. Raha ny angom-baovao, efatra ny jiolahy voasambotra tamin’ny fitondrana ireo kitapo ireo, fantatra fa avy any amin’ny tanin-drongony ao Antodabe Isandra sy ao Befotaka Atsimo.
Mirongatra tanteraka ny trafikana rongony ary isan’ireo asan-jiolahy mbola tsy voafehy eto Madagasikara. Tsy ela akory fa vao ny alatsinainy teo ny nahatrarana foto-drongony miisa 150 000 tamina tany 20 ha, milanja 1,680 t, nandritra ny hetsika “Ady jamala” naharita folo andro tao Mahadera, distrikan’Ambanja. Teo ihany koa ny nahitana ny rongony maina milanja 1,300 t tao amin’ny distrikan’Ambilobe, nokasain’olon-tsy fantatra hamidy. Teo ihany koa ny nahatrarana ilay tanin-drongony mirefy 145 ha tao amin’ny kaominina Itampolo, distrikan’Ampanihy Andrefana, ny tapatapaky ny volana jolay. Fantatra ihany koa fa tanin-drogony mirefy 120 ha no hita tao Ankamenaha, raha 25 ha ny tra-tehaky ny zandary tao Ampitanaky.